Nadiifinta la taaban karo, Sodium Gluconate, Sodium Lignosulphonate - Chengli
Binzhou Chengli Dhismaha Qalabka Co., Ltd. wuxuu ku yaalaa muuqaalka quruxda badan ee Yellow River Delta Center City-Binzhou, waqooyiga Shiinaha. our shirkadu waa xirfad ahaan ku takhasusay habka wax soo saarka,cilmi baaris,horumarin, iyo iibinta oo ah waxyaabo isku dhafan oo la taaban karo.
Binzhou Chengli Dhismaha Qalabka Co., LTD had iyo jeer waxay u hoggaansamaan tayada sida aasaaska, hal-abuurnimada sida awoodda, waxayna ku dadaalaysaa inay la mid noqoto hoggaamiyaha warshadaha lagu daro. Daacadnimada shirkadeena, xooggeeda iyo tayada wax soo saarkuba waxay helaan aqbalida warshadaha.
082021 / Abriil
Polycarboxylate superplasticizer waa jiilka thrid superplasticizer la taaban karo kaas oo horay uga soo saaray nooca kaligniyamka lignosulfonate iyo superplasticizer nooca naphthalene. Polycarboxylate superplasticizer waa wax ka badal la taaban karo superplasticizer oo ay baaraan teknolojiyad cusub. Waa envi cagaaran ...
072021 / Abriil
Farqiga u dhexeeya nooca yareynta nooca polycarboxylate superplasticizer iyo nooca haynta slump
Warshado isku dhafan oo la taaban karo oo fara badan ayaa leh labada nooc ee yareynta nooca polycarboxylate superplasticizer iyo nooca haynta hoos udhaca, laakiin waa maxay farqiga u dhexeeya isticmaalka iyaga? Marka sheygaaga la taaban karo sida sibidhka, isu geynta iyo ciidda uu kufiican yahay, kaliya nooca yareynta nooca polycarboxylate superplasticizer ayaa ...
092020 / Sebt
Saameynta ilaalinta deegaanka ee kudarsan shayga la taaban karo
Mid ka mid ah macaamiisheena ayaa i weydiiyay: 'sidee wax soo saarkaagu u socdaan? Weli ma wanaagsan tahay? taasi waxay iga dhigeysaa inaan ogaado in Shiinaha ilaalinta deegaanka ay durba saameyn weyn ku yeelatay wax soo saarka kiimikada sida shamiinka la taaban karo ee Shiinaha. Aan kuu soo bandhigo bilowgii. Sida aan wada ogsoonahay, Shiinaha waxay horumarisaa qui ...